Ukubuya kukaYesu KRISTU NGOSEPTEMBA OKANYE Oktobha 2016 | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Ngaphambi kokuba siphendule ngezifundo ukubuya kukaYesu Kristu, kubalulekile ukukhumbula esisiseko ubuKristu ngokukodwa ukuze baphile elukholweni ngexesha lesiphelo.
KUBA amaKristu TIMES ISIPHELO
Okokuqala kuba yamaKrestu ukuqonda ukuba uThixo unguMdali zonke izinto kungoko kuba indalo kaThixo.
Kwakhona ndaqonda ukuba uThixo wasidala simahla inkululeko yokuzikhethela ngokokude isigqibo ngokwethu indlela ukusebenzisa esi sipho uThixo usinike « Ubomi ».
Ukuze ngcono ukuqonda uThixo kunye nokudalwa womntu, Siyakumema ukuba ufunde incwadi yam « INtshumayeli UKumkani Return loBumnyama uyeza ekukhanyeni » funda inqaku malunga ncwadi: The Book – INtshumayeli Return of uKumkani
UThixo ngenceba yakhe engenasiphelo wasinika eli ezixabisekileyo « nobomi » zonke ngelishwa encinane into ngexabiso layo. Ubomi wanikwa kuthi nguThixo ngaphandle ngokugunyazisa nto kuthi imbuyekezo.Yinto isipho. Kodwa ngenye imini ukuba ubomi iphela ngokungenakunqandwa.
Kuba abathile, ngelishwa, oku besebencinane ukuba ubomi iyeka, kuba abanye baya kufikelela ayengakukhathalelanga nekhulu leminyaka okanye ngaphezulu.
Ke ngoko, nje emva mzuzu kokufa komzimba, umphefumlo livela phambi umdali wayo.
simele siqonde ukuba ixesha uyindalo kaThixo yaye ke ngalo mzuzu ukufa umphefumlo efika ngqo ngexesha umgwebo wokugqibela.
Ngeli tyala ezintathu iinketho owawufumaneka imiphefumlo.
Abanye baba nemvelo wobomi iya akenzi ukuba bachithe unaphakade esihogweni.
Uninzi baye ubomi nokuba nyulu okanye sigwenxa « Ukuzifudumeza » kodwa ungangeni uyakuhlala ngonaphakade esihogweni.
Abo ukuphila ubomi obunempilo ngentlonipho nobulungisa uya kuhamba nangona ubomi babo engumzekelo uyakuhlala ngonaphakade esihogweni.
Kukuba ngumKristu ukuqonda ukuba yonke imiphefumlo iyagatywa ekuzalweni ukuba bachithe unaphakade esihogweni. Yinto eqinisekileyo!
Kwaye akukho nto likuvumela ukuba ndithi xa esihogweni kuya kuba ngaphantsi buhlungu kwabanye kunokuba abanye ngokusekelwe izenzo abazenzayo ngexesha ebomini babo.
Akukho into eyinqambi akanakungena ebukumkanini bamazulu kwaye bonke abathwali yesono santlandlolo ngaba ekupheleni ubomi yethu enokufa Emhlabeni, ngoko thina Bamgweba ke bonke ukuba bachithe ubomi obungunaphakade esihogweni.
Yintoni eya esihogweni akukho bani kanye uyazi, nangona kunjalo, encwadini uEnoki thina ubenemboniselo, libonisa ukuba kukho iindawo ezulwini okanye uvaleleke ngonaphakade yonke indalo akuba amthobele uThixo. UYesu Kristu wathetha esihogweni iinkumbulo Gehena (kodwa akukho nto ithi eBhayibhileni ukuba yintoni kanye eGehena) Kwakhona Pole ukuze oku kube esihogweni kwinqaku yam: ingqiqo, ukuze baziqonde UTHIXO ESIHOGWENI ,
Ngayo kukoyikwa ukuba isihogo yindawo apho ubomi obungunaphakade ikhona ngaphandle uthando lukaThixo. Kodwa nangoku phantsi kolawulo kunye nokwaluswa neengelosi zakhe. (Funda incwadi uEnoki)https://victorpicarra.wordpress.com/le-livre-dhenoc/
Kukuba ngumKristu ukuqonda ukuba kuphela Uthando kaYesu Kristu kusenza sibe nethemba ukubaleka nesi siphelo hellish ngonaphakade icwangciswe nguThixo eluntwini ukususela kokungathobeli kuka-Adam no-Eva.
Ukuba umKristu ukuba ungumoni ukuqaphela nokwamkela ukuze basindiswe uthando lukaYesu Kristu, kule ngxaki hellish.
Kukuba ngumKristu ukwamkela kwaye baphile imfundiso kaYesu Kristu uthando, uxolo, uthando, uvelwano kunye ukuthobeka.
Ukuba umKristu ukubhaptizwa emanzini, uMoya aze azalwe kwakhona.
Ngobhaptizo lwamanzi siyaguquka ezonweni zethu size beza kuYesu Kristu ukuze basindiswe ngokwamkela uthando lwakhe kunye legazi kuthi emnqamlezweni.
Ngokusebenzisa ubhaptizo loMoya sicela uThixo ukukhokela ubomi bethu. Emva kokufumana lwamanzi bhaptizo umKristu kufuneka enze indlela yobuqu ngomthandazo ukucela uThixo ukukhokela nokulawula ebomini bakhe.
Hambani ebomini akukho elide iminqweno umzimba kodwa uMoya. Oku ubhaptizo loMoya.
Ngaloo ndlela azalwe kwakhona kubomi bethu basemhlabeni ekusukeleni ubomi bethu uthando, uxolo, uthando, uvelwano kunye ukuthobeka. Kodwa semoyeni ukulandela imfundiso kaYesu Kristu, ukukhonza uThixo ngokuthobela imiyalelo yakhe nokunceda abo bafuna uncedo lwethu. Isilumkiso uncedo uzise akufuneki kukhokelela kwalowo lilelakhe uzingise ezonweni zabo nezenzo ezibi. Okanye kunikhokelela ukukhanyela imfundiso kaYesu Kristu.
Xa wenze kukunceda ube onoxanduva lokusebenzisa le uncedo.
Ngoko isibakala wokunikela imali likhoboka leziyobisi okanye ukunxila akavumeli ucinge ukuba ahlole umsebenzi omhle. Ukuba ucela imali nisondeze ukudla. Kwakhona isibakala wokunikela imali kwabo basebenzisa abantwana ukungqiba kufanele ukuba ikhokelele ndiyakholwa ukuba wena kukuhlolisisa umsebenzi omhle. Ukuba babe noxanduva lo gadalala abantwana.
Emva ubomi bethu emhlabeni, umKristu bavele phambi koThixo ngenxa yomgwebo. Nangalo uthando uYesu Kristu, yena ongathanga ngqo esihogweni.
UmKristu ligwetywa, ukuba imisebenzi yobomi bakhe baba okulungileyo, uya kuya ebukumkanini bamazulu. Ukuba imisebenzi yobomi bakhe ebengonelanga okulungileyo, uya kucanda miphefumlo phambi kungena ebukumkanini bamazulu. Kodwa ukuba imisebenzi yobomi bakhe ezimbi uya kuya esihogweni nangona waba ngumKristu.
Iminyaka engamawaka amabini oku kunjalo.
Kodwa ekupheleni wexesha izinto utshintshe kancinane.
Yintoni utshintsho kukuba ekupheleni kwexesha likaYesu Kristu kufuneka abuyele nguMhlaba ukuba ngukumkani khona iminyaka eliwaka ukuba abahlule abantu umgwebo wokugqibela.
Yaye amaKristu elungileyo ukubuya kukaYesu Kristu ngethemba lokuba uya kuba kungekudala silindele.
Ulawulo lukaKrestu emhlabeni iya kuba bangcamla kanaphakade, siya kuphila ixesha elide, kodwa uya kucanda nokufa ngaphambi kokuba ubomi obungunaphakade.
Ububi uya angagxothwa emhlabeni ngexesha leminyaka. Siya kuhlala phantsi ebukumkanini bukaThixo Wothando Peace.
Kodwa, ngenxa yokuba kukho kodwa, kwaye kubalulekile. Ingaba ukubaukubuya kukaYesu Kristu kufuneka njengoko inenimba.
Ngoko ke phezu isondele ukubuya kukaYesu Kristu kwaye ayahlala kunzima eluntwini.
Sonke sibone ukuba kudlula iminyaka, ingakumbi ukusukela ngo-29 Septemba 2008, kwaye amaxesha amaninzi anzima kuwo onke amanqanaba. Bona inqaku yam: KU IIMPAWU AMATHATHU ukubuya kukaYesu Kristu e mhlabeni!
Emhlabeni : iinyikima, iintaba-mlilo, izaqhwithi, izantyalantyala zemvula, iinkanyamba, imililo, ukutshintsha kwemozulu, nokuqengqeleka, ingxolo engaziwayo ingxolo kunye nomhlaba sibutyukile nokudala nasezimfanteni enkulu.
Emazulwini: neemeteorite uyawa, iintaba elanga, yazisa ukubuya iNibiru, ukufudumala kwezi izijikelezi langa, UFO.
Wildlife : phaku Abafileyo zizigidi ngonyaka ngamnye ukususela imfuyo, izilwanyana zasendle neentaka neentlanzi.
Abantu : Intshabalalo, izifo, ukulahlekelwa imilinganiselo, iEksodus, Ugonyamelo, iimfazwe namarhe eemfazwe.
ICawa : Uwexuko zazibonakala nqanaba liphezulu. Upopu iye iquka imfundiso kaYesu Kristu, ngokuqaphela zonke iicawa umendo kuThixo.Ngoko ndizilibala kanye amazwi kaYesu Kristu, « Ndim indlela nenyaniso nobomi; akukho namnye uzayo kuBawo engezi ngam! «
La mazwi kaYesu Kristu bomelele kwaye Azifumaneki nempikiswano.
iingxolo Unknown sisithonga angacaciswa ngaMaxilongo beSityhilelo.Https://youtu.be/mTOQvDzihTU
Zonke ezi ziganeko zenzeka outsized kangaka yaye waprofeta eBhayibhileni ukuba kubhengeza amaxesha esiphelweni kwaye ekubuyeni kukaYesu Kristu.
Yonke kwenziwa nguThixo ukuba ndimvuse uluntu, kodwa ngelishwa bambalwa kakhulu kubonakala ukuba bazazi amaxesha ezikhethekileyo siphila kuba.
Amadoda cinga ngento baya kwenza veki ezayo okanye indlela kuzakuvala ekupheleni kwenyanga, endaweni ukuthandaza kuThixo ngenxa usindiso imiphefumlo yabo, nditsho phakathi kwamaKristu.
Kodwa zonke iingxaki iintlekele apho uluntu kuya kuyenza mandundu kwaye ide iNkosi uYesu Kristu.
kwimizuzu ezoyikekayo silindele phambi kokubuya uKumkani Kumkani uYesu Kristu.
Siyazi efuna ukuba yokugqibela phambi kokufika kwakhe kuya kuba inzima.
Ngaphezulu kunakuqala, simele sithandaze kuthandaza kwakhona kwaye kwakhona yonke imihla.
Simele simbulele uThixo lonke ixesha uncedo bakhe aze athandaze kuThixo, ukuba asikhokele asikhusele kwi ngamaphanyazo onke yobukho bethu, ngokukodwa kula maxesha anzima kwaye YeApocalypse.
Kukuba ngumKristu ukuqonda ukuba uthando lukaYesu Kristu isandla owenziwa nguThixo ukuba asisindise esihogweni.
Ngaphezu kokonga imiphefumlo yethu esihogweni luthando lwakhe naye uYesu Kristu uya ukugcina inani kuthi phambi kokubuya kwakhe ngokwasemzimbeni Emhlabeni.
Abo baya kusindiswa kwaye uya kuba iBandla likaYesu Krestu, baya ingaguqulwa njani na ibe bavakalelwa ngephanyazo uya kuba nomzimba bokukhanya. Baya isuswe ezulwini yaye ukufikelela ngqo ubomi emhlabeni ebomini obungunaphakade ngaphandle ukufa.
Abo ababhubhileyo abaye ukubiwa ngokungathi usaphila. Baya kuvuswa umzimba yokukhanya kunye nazo ziza kususwa ezulwini nabo baye basindiswe zabo zokuhlala.
Kunye ke baye umtshato weMvana uya kuba ngumnqophiso ongunaphakade eziya kwenza uYesu Kristu kwibandla lakhe abembumbile.
Ukuba uThixo ukuzama ukuvusa nathi zonke kukuba uninzi ongasindiswayo kwaye nokuze kulunge yinxalenye iBandla likaYesu Krestu ukuba iza kupheliswa.
UYesu Kristu, noThixo ndiyamthanda umntu!
Ke umntu lowo anqwenela ukuba bachithe ubomi obungunaphakade?
Musani ukucinga ngephanyazo ukuba amaxesha isiphelo kukulavuza, le ngeziganeko ezininzi, ekupheleni kwexesha eliyisebenzayo kwaye akukho nto inokuyinqanda.
UYesu Kristu emnyango kwaye ixesha ithemba basindiswe, ukuba baguquke ezonweni zethu, ukubachazela zethu, iimpazamo zethu, iimpazamo zethu neengcinga zethu ongcolileyo.
INKQUBELA osayina Ukubuya kukaYesu Krestu
Ngenxa progression of imiqondiso ngokwenene esikubo Kumgama yokugqibela phambi kokubuya kukaYesu Kristu.
Ndamchazela kwinqaku yam WOKUGQIBELA IIMPAWU AMATHATHU ukubuya kukaYesu Kristu e mhlabeni! Kwakukho imiqondiso ezintathu phambi kokubuya kukaYesu Kristu.
01) Ukutyhilwa Anti-Kristu
02) Eyona ngokutsha sesithathu itempile yaseYerusalem
03) Impixano zehlabathi kuvunyelwana nguYesu Kristu kusekubuyeni kwakhe
Kuba ngumqondiso wokuqala « anti-Kristu » simele siqonde ukuba kukho amanqanaba aliqela.
Okokuqala ngaphakathi ibandla, umchasi ezikhandelwa elinempumelelo bonke oopopu ookumkani ukususela izivumelwano waseLateran.
Upopu yokugqibela « uFrançois » personalizes le umchasi ukuba phantsi owazenza iMvana yingcuka ekhokelela amaKristu alandela ngqo esihogweni. Bona inqaku yam: INGXELO YA kokufa ibandla lobuKatolika
Ngokutsho siprofeto sikaMalaki soopopu, Pope Francis na upopu lokugqibela. Nabani na ogama isiprofeto « uPetros yamaRoma », nto leyo eyakhokelela ibandla ebudeni bembandezelo ngaphambi kokutshatyalaliswa eRoma kunye ukubuya kukaYesu Kristu.
Ukutshatyalaliswa eRoma akuthethi ukutshatyalaliswa isixeko eRoma yinyikima enkulu, kodwa ekuweni eYurophu njengoko eRoma omtsha ‘ukumkani wesibhozo yeSahluko XII sencwadi beSityhilelo. » kwaye ngoko ke le nkqubo Umchasi.
Siyazi evela encwadini Apocalypse kunye umprofeti uDaniyeli, imbandezelo enkulu yokugqibela iinyanga 42.
Ukuze Pope Francis wonyulelwa ngoMatshi 13, 2013 sifanele mhlawumbi abuye ngawo uKrestu eMhlabeni ngoSeptemba okanye Oktobha 2016, mhlawumbi ngexesha umthendeleko amaxilongo.
Bona inqaku yam: ISIPHELO YOKUGQIBELA KWIVEKI kaDaniyeli ISIPHELO ISIPHELO 2015 OKANYE 2016
I anti-Kristu naye luhlobo emnye yeedemon izilwanyana ezimbini umprofeti obuxoki eneenjongo ukuba batshutshise amaKristu nokukhokela ngqo endleleni esihogweni.
Siza lula ukuqonda ukuba Zoopopu zakutsha nje irhamncwa echazwe encwadini beSityhilelo kwiSahluko 17.
Xa ezithile bona Pope Francis umprofeti obuxoki. Mna ngokobuqu Ndiyakholwa ukuba Pope Francis yenye amarhamncwa ezimbini elwandle, irhamncwa zehlabathi yokuba owayesakuba uPopu Benedict XVI abaninzi ex-Pope usaphila. Ke yena umprofeti wobuxoki Ndiyazi enye, ogama abalandeli benitshutshisa amaKristu kuphela.
Nguwo lowo kuthiwa « Mohammed » ngubani nangona abafileyo 632 wazala unqulo lobuxoki ukuba bakhonze Islamists kunye jihadists.
Le ngokutsha na umnqweno wokwenene amaJuda, kodwa uThixo soze sivumele ngokutsha kwetempile kufutshane lokukhonzela « al-Aqsa » zonqulo lobuxoki umprofeti obuxoki.
Itempile omtsha iza kuba itempile uYesu Krestu uya kuhla ezulwini« iYerusalem yasezulwini »
Oku Kumgama kuphela yokugqibela phambi kokubuya kukaYesu Kristu.
Kucacile ukuba le mfazwe uqalwa ukususela 2012 Sibona isikali kwalo ungquzulwano esele ehlabathi kunye ezuza amandla lwemilinganiselo suku ngalunye.
Yile impixano ukuba uza uYesu Kristu kusekubuyeni kwakhe.
Thina ngoFebruwari kwaye oko kwaziswa eendaba ikude lee aqinisekisayo. Turkey, Saudi Arabia ufuna ukuya emfazweni nxamnye neSiriya. YaseRashiya kwaye Iran kumchasa ndithembise Ukubuyela kule belligerents ebhokisini omtsha ukuba beze Aram.
China yokuziphatha yaso imfazwe nxamnye US kunye namahlakani ayo eAfrika Aram endle kwezoqoqosho. Zongenelelo lomkhosi eMpuma phandle, ke mbandela kuphela ixesha yomkhosi. Ngokucacileyo amaTshayina uya kungenelela ekuxhaseni imikhosi Russian.
Kwakunjalo kumathafa aseMegido kwaSirayeli ukuba uYesu Kristu ngokutsho kweBhayibhile kufuneka uyeke kule mfazwe .
Ngoko xa iimfazwe yangoku ephuphumayo Aram uSirayeli uya kuhlaselwa. Uya kwandula kubakho Sinezwi iinyembezi kodwa kuya kuba kakhulu kwexesha ukuza kuYesu Kristu baze basindiswe. Kuba oku kuya kuba sisiphumo amaxesha ekupheleni liya kuzalisekiswa kunye ukubuya kukaYesu Kristu.
Kwaye ukuba kungenzeka ukuba kwi uhlalutyo le miqondiso, ukuze ngenyanga kaSeptemba okanye Oktobha, 2016.
Kulo nyaka-2016, sele ndiyazi ukuba kuya kuba kubi ngakumbi 2015. Ukuba ke uKristu aluzanga kulo nyaka-2016, simele silindele into eyoyikekayo. Ezifana ukuwohloka kwezoqoqosho, kodwa iintlekele ngobukhulu ezinkulu.
Ndiya kuphinda ngokwam ngokwaneleyo, Andinguye umprofeti , kwaye sele ndacudisa bani ngokuphindaphindiweyo kujoliswe ixesha elifutshane wokubuyiswa iNkosi yethu uYesu Kristu. Xa nengalunganga andiyi ndiphazamile malunga ukuqhubela phambili iimpawu unyaka nonyaka .
Njengoko ndiphazame kakhulu zokupapashwa ukubuya kukaYesu Kristu, ndifuna ukuba alumke yaye uze uqaphele, ukuba uYesu Krestu uya kuza njengesela, ngoko ke akukho bani waziyo ukuba kuya kuba kanye xa ukubuya kwakhe.
Njengoko kakuhle njengoko silindele kulo nyaka ukubuya kwakhe ngenyanga kaSeptemba okanye Oktobha njengako uhlalutyo yam nemiqondiso, kodwa kufuneka ndithi, uYesu Kristu eze ngaphambili aze athabathe ecaweni yakhe, nanini na phambi kokubuya kwakhe.
Mandithathe kwakhona ndithi ukuba olu ukubuya kunokuba kamva kwaye ungenelele 2017 okanye 2018 apho kukho kananjalo iimpawu endiya ukucacisa xa kufika ixesha.
Ngoko qiniseka, sithandazela yaye sinethemba kaYesu Kristu ukubuya ekufuphi kuba ngokukhawuleza uya kubuyela neentlungu ngaphantsi uya kukhanyiseleka eluntwini.
Kulo nyaka-2016 nangona nzima uluntu kuba kuthi maKristu ngonyaka lethemba, inguquko yaye sithandazela ukuba uYesu Kristu kusenza ebhaliswe encwadini yobomi obungunaphakade.
Baguquke kwaye abaninzi beze kuKristu, ukuba awufuni ukuba uyakuhlala ngonaphakade Esihogweni.
Ngexesha loku kubhala zisenako basindiswe ngamnye. UThixo wamnika ukuba yokuzikhethela kwaye eli lixesha ukuthatha endleleni.
Yizani kuYesu Kristu ngokubuza ubhaptizo amanzi umbingeleli, umfundisi okanye ngumKristu size sithandaze kwakhona kwaye kwakhona ukuba afumane ukhuseleko uMoya oyiNgcwele kaThixo, ukuba akuncede, ukukhusela nokukhokela ukunyathela kwakho kwi angqingqwa amaxesha lesiphelo yobumnyama.
Uthando, Uxolo Zovuyo ezintliziyweni namakhaya uzilungiselela yokususwa yiCawa inxenye kunye imbuyekezo phezu kweNtaba yemiNquma eYerusalem lweNkosi noKumkani yethu uYesu Kristu, unyana okuphela kaThixo ngenxa bolawulo lwakhe uKumkani Ookumkani behlabathi iminyaka eliwaka eyahlula uluntu ngesiphelo.
Ndiyanimema ukuba ufunde amanqaku zam:
Ukuba uYesu Kristu kade KWENZEKA, iCawa badake e ngaphantsi isizukulwana!
ISIPHELO IVEKI YOKUGQIBELA kaDaniyeli ISIPHELO ISIPHELO 2015 OKANYE 2016
Njengoko ixesha Yomthandazo Ndiyanimema ukuba athandaze:
IMITHANDAZO uBawo wethu kunye Zukisani uMariya